सुभाङ्गी र ईशा उपाधि नजिक - Khelpati
सुभाङ्गी र ईशा उपाधि नजिक
शुक्रवार, पुष ४, २०७६ खेलपाटी संवाददाता
काठमाडौं । सुभाङ्गी लक्ष्मी शाह र ईशा श्री शाह १७ औं जयकर स्मृती राष्ट्रिय जुनियर टेनिस प्रतियोगिताको छात्रा यू– १४ मा उपाधि नजिक पुगेका छन् ।
शुक्रबार सम्पन्न भएको सेमिफाईनलमा सुभाङ्गीले अजा रेग्मीलाई ६–३, ६–१ को सेटमा पराजित गर्दै फाईनल पुगेकी हुन् । अब उनले उपाधिका लागि ईशासंग प्रतिस्पर्धा गर्नु पर्नेछ । ईशाले आईशा डोलकर गुरुङलाई ६–०, ४–६, ६–३ को जित निकाल्दै सुभाङ्गी संगको भेट पक्का गरेकी हुन् ।
जयकर टेनिस एकेडेमीको आयोजनामा भएको प्रतियोगिताको छात्रा यू–१२ तर्फ ईभा अधिकारी र सुनिरा थापाले फाईनल यात्रा तय गरे । ईभाले प्रशंसा मोक्तानलाई ६–२, ७–५ ले तथा सुनिराले जेनी खड्कालाई ३–६, ६–२, ६–३ ले पराजित गरे । यस्तै यु १० तर्फ प्राज्ना मानन्धर र समृद्धि महर्जन फाईनल प्रवेश गर्न सफल भए । प्राज्नाले सैभी ढकाललाई ६–३, ४–६, १०–४ ले तथा समृद्धिले लाशा प्रजापतीलाई ६–२, ६–३ले पराजित गरे । यु–९ तर्फ शिभाली गुरुङ्गले प्राज्ना मानन्धरलाई ४–२, ०–४, ४–१ ले पराजित गर्दै फाईनल प्रवेश गरिन् । यस्तै कर्मिष्ठा नुगाले जु सिङ्गोईलाई ४–०, ४–० को सोझो सेटमा पराजित गर्दै फाईनलमा शिभाली संगको भेट पक्का गरिन् ।
मिक्स जोडी तर्फ ईशा श्री शाह र चिराग तिमल्सिनाको जोडी र अकी जुवेन रावत र सुभाङ्गी लक्ष्मी शाहको जोडीले उपाधीका लागि प्रतिस्र्धा गर्ने नेपाल टेनिस संघले जनाएको छ । ईशा र चिरागको जोडीले सक्षम बिक्रम शाह र सुनिरा थापाको जोडीलाई ६–१, ६–२ र अकी र सुभाङ्गीको जोडीले सौगात बि.क. र श्रेया भट्टराईको जोडीलाई ६–१, ७–५ ले पराजित गर्दै फाईनल भिडन्त पक्का गरेका हुन् ।
छात्र यु –१२ तर्फ सक्षम बिक्रम शाह, राजविर प्रधान, स्लोक कजेर खड्का र आयुश्मान एच. घले तथा यु – ९ मा प्रनभ घिमिरे, अमत्र्या शर्मा, स्पर्श तिमल्सिना र शंख हाङ्ग राईले अन्तिम चारमा स्थान बनाउन सफल भए ।
नाडाललाई हराउँदै डोमिनिक सेमिफाइनलमा
न्युजिल्याण्डलाई १ सय ८१ रनको लक्ष्य
फिन्च र स्मिथको शतकमा भारतलाई बलियो लक्ष्य
राष्ट्रिय क्रिकेट टिमको प्रशिक्षण (फोटोफिचर)
कप्तान फिन्चको ५ हजार रन पुरा
रोमा नकआउट चरणमा, मिलान रोकियो